တဦးတည်းအတွက်သုံးဦးနှောက်၏ဦးနှောက်အခြေခံခရီးစဉ် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဦးနှောက်အခြေခံ ဦးနှောက်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးလူသိများသောပုံစံတစ်ခုမှာ ဦး နှောက်မော်ဒယ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Paul MacLean မှတီထွင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အလွန်သြဇာညောင်းခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းနှစ်များ၌ဤပုံစံ၏ဒြပ်စင်များစွာကိုမကြာသေးမီကအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုယေဘူယျအားဖြင့်နားလည်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ MacLean ၏မူလပုံစံသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာသော ဦး နှောက်သုံးခုကိုခွဲခြားခဲ့သည်။ ဒါ တိုတောင်းသောဗီဒီယို ထိပ်ဆုံးဇီဝဗေဒပညာရှင် Robert Sapolsky က triune ဦး နှောက်ပုံစံကိုရှင်းပြသည်။ ဒီမှာနောက်တစ်ခု တိုတောင်းသောဗီဒီယို အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါအထူးကုဒေါက်တာ Dan Siegel ကသူ၏ ဦး နှောက်၏ 'အသုံးဝင်သော' ပုံစံနှင့်၎င်းကိုမှတ်မိရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြသည်။ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုတရားဝင်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရ ၅ မိနစ်ကြာကြည့်ပါ ဗီဒီယို.
အဆိုပါ Reptilian ဦးနှောက်
ဤသည်ကဦးနှောက်၏ရှေးအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်း 400 သန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်ကို stem နှင့် cerebellum: ဒါဟာတစ်တွားသွားသတ္တဝါရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အဓိကအဆောက်အဦများပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာနက်ရှိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်းတည်ရှိသောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောရိုး၏ထိပ်ပေါ်မှာကိုက်ညီနေသည်။ ထိုသို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း, ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်, သွေးပေါင်ချိန်, အသက်ရှူနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်သောကြောင့်အခြေခံအကျဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်ထား။ ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်းကအခြားနှစ်ဦးကို '' ဦးနှောက် '' နှင့်အတူကိုသြဒိနိတ်ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါ reptilian ဦးနှောက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသော်လည်းအတန်ငယ်တင်းကျပ်နှင့် compulsive ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
Limbic Brain ၎င်းကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများ ဦး နှောက်ဟုလည်းခေါ်သည်
အဆိုပါ limbic ဦးနှောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ limbic စနစ်ကစီမံခန့်ခွဲ။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူန်းကျင် 250 သန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလူသားတွေအတွက် '' စိတ်ခံစားမှု '' ဟုခေါ်ကြသည်အရာကိုတာဝန်ရှိသည်ဒါကြောင့်နှငျ့ညီညှတျနှင့်လွဲအတွေ့အကြုံများထုတ်လုပ်ကြောင်းအပြုအမူတွေ၏အမှတ်တရများမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ချစ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ထွက်လဲကျဘယ်မှာဦးနှောက်နှင့်အခြားသူများနှင့်နှောင်ကြိုးများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပျြောအပါးစနစ်၏အဓိကဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် ဆုလာဘ်စနစ်က လူသားတွေထဲမှာ လူသားများအပါအ ၀ င်နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်မိမိတို့၏သိုက်ကိုစွန့်ခွာရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မှီအချိန်ကကလေးငယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကြက်ဥပြုတ်ထွက်သွားသည့်အပြင်တွန့်လိမ်နေသောကလေးတွားသွားသတ္တဝါအများစုနှင့်မတူပါ။
အဆိုပါ limbic ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအားကောင်းတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်း, မကြာခဏမသိစိတ်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်ယုံကြည်ချက်နှင့်တန်ဖိုးတရားစီရင်ပိုင်၏ထိုင်ခုံဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ thalamus, hypothalamus, pituitary gland, amygdala, hippocampus, နျူကလိယ accumbens နှင့် VTA - အ limbic system ကိုခြောက်လအဓိကအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ဤတွင်သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ thalamus ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ switchboard အော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေသို့လာ (အနံ့ မှလွဲ. ) မည်သည့်အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ thalamus သွားနှင့် thalamus လုပ်ငန်းများ၌ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ညာဘက်အစိတ်အပိုင်းများမှသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့သည်။
အဆိုပါ hypothalamus တစ်ဦးကကော်ဖီ bean ကို၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအရေးအပါဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအငတ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ပါဝင်လျက်ရှိ၏ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, စိတ်ခံစားမှု, ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်; လိင်စိတ်နိုးထ, ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian (အိပ်ပျော်ခြင်း) rhythms နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့် endocrine (ဟော်မုန်း) စနစ်။ ထို့အပြင်က pituitary gland ထိန်းချုပ်သည်။
အဆိုပါ pituitary အများအားဖြင့် 'master gland' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အခြား endocrine (သို့) ဟော်မုန်းဂလင်းများကိုထိန်းချုပ်သောဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း၊ အပျိုဖော်ဝင်ဟော်မုန်းများ၊ သိုင်းရွိုက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဟော်မုန်း၊ ၎င်းသည် anti-diuretic hormone (ADH) ဟုခေါ်သောအရည်မျှတသောဟော်မုန်းကိုထုတ်လုပ်သည်။
အဆိုပါ amygdala မှတ်ဥာဏ်ပြုပြင်မှုအချို့ကိုလုပ်ဆောင်သော်လည်းအများစုအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အမျက်ဒေါသနှင့်မနာလိုခြင်းစသည့်အခြေခံစိတ်ခံစားမှုများကိုကိုင်တွယ်သည်။ ဒီမှာ တိုတောင်းသောဗီဒီယို amygdala ပေါ်အကျော်ကြားဆုံးသုတေသီတစ် ဦး ပါမောက္ခဂျိုးဇက် Ledoux က။
အဆိုပါ hippocampus မှတ်ဉာဏ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ ဦးနှောက်၏ဤအပိုငျးသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အဘို့အပိုအမြဲတမ်းမှတ်ဉာဏ်မှတိုတောင်းသောသက်တမ်းမှတ်ဉာဏ် converting အဘို့နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကိုကမ္ဘာပေါ်မှာ Spatial ဆက်ဆံရေးပြန်ခေါ်ဘို့အရေးကြီးပါသည်။
အဆိုပါ နျူကလိယ Accumbens အကျိုးကိုဆားကစ်တစ်ခုအလယ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနှစ်ခုမရှိမဖြစ် neurotransmitters အပေါ်အထူးသဖြင့်အခြေခံသည်: dopamine အရာအလိုဆန္ဒနှင့်အပျော်အပါး၏မျှော်လင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် serotonin အဘယ်သူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကျဲခြင်းနှင့်တားစီးပါဝင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုအတော်များများကမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens တွင် dopamine ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေပြီး၊ serotonin။ ဒါပေမယ့်နျူကလိယ accumbens အထီးကျန်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ယင်းနှင့်အတူက, အပျြောအပါးများ၏ယန္တရားများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အခြားသူတွေစင်တာများနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်း, အထူးသဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာစကိုခေါ် VTA.
ဦးနှောက်ကို stem ရဲ့ထိပ်မှာနှစ်လယ်ပိုင်းဦးနှောက်မှာတည်ရှိပါတယ်, အ VTA ဦးနှောက်အရှိဆုံးစရိုက်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ axon ထို့နောက်နျူကလိယ accumbens မှပေးပို့ရာ, dopamine သော VTA ၏အာရုံခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ VTA လည်းသူ၏ receptors ထိုကဲ့သို့သောဘိန်းဖြူနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်အဖြစ် opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်နဲ့အတူ Endorphins ကလွှမ်းမိုးနေသည်။
အဆိုပါ Neocortex / နှောက် cortex ။ ဒါဟာအစ Neomammalian ဦးနှောက်ဟုခေါ်သည်
ဤသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှနောက်ဆုံးပေါ် '' ဦးနှောက် '' ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနှောက် cortex တိကျတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်ဒေသများသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်တွေ့ခံစားရသူတို့သည်နားကြားများနှင့်အရသာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတရားကနေသတင်းအချက်အလက်စီမံပါမည်။ အဆိုပါ cortex ၏အရှေ့ဘက်အပိုင်းဟာတိုကျရိုကျ cortex သို့မဟုတ် forebrain, ဦးနှောက်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ရေးစင်တာဖြစ်၏ ဒါကြောင့်အင်အားကြီးစဉ်းစားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို, အစီအစဉ်, ပြဿနာများကိုဖြေရှင်း, ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များပါစေ။
အဆိုပါ neocortex ပထမဦးဆုံးမျောက်ဝံများအတွက်အရေးပါမှုယူဆနှင့်၎င်း၏နှစ်ခုကြီးမားသောနှင့်အတူလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီ ဦးနှောက် hemisphere ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍ။ ဤရွေ့ကား hemisphere လူ့ဘာသာစကား (15,000-70,000 နှစ်ပေါင်း c ကိုလွန်ခဲ့တဲ့), စိတ္တဇအတွေး, စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ဝိညာဏ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ကြပြီ။ အဆိုပါ neocortex ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပြီးနီးပါးအဆုံးမဲ့သင်ယူမှုစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ neocortex လူ့ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရာဖြစ်တယ်။
တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ neocortex ၏လတ်တလောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် prefrontal cortex ကြောင်း 500,000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမကြာခဏအလုပ်အမှုဆောင်ဦးနှောက်ဟုခေါ်သည်။ ဤသည် Self-ထိန်းချုပ်မှု, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဝိညာဏ်, ဆင်ခြင်တုံတရားအတွေး, အသိပညာ, နှင့်ဘာသာစကားများအတွက်ယန္တရားများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးစွမ်းသည်။ ဒါဟာအစအနာဂတ်မဟာဗျူဟာနှင့်ယုတ္တိအတွေးနှင့်စာရိတ္တနှင့်အတူဆကျဆံ။ ဒါဟာအသက်ကြီးတဲ့စရိုက်ဦးနှောက်၏ 'minder' 'ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမဆင်မခြင်အပြုအမူအပေါ်ဘရိတ်တားစီးသို့မဟုတ်ထားခွင့်ပြုပါတယ်။ ဦးနှောက်၏ဤအသစ်များတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆောက်လုပ်ဆဲနေဆဲသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်၏ဤသုံးပါးအစိတ်အပိုင်းများ, အ Reptilian, Limbic နှင့် Neocortex, လွတ်လပ်စွာအချင်းချင်းလည်ပတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ကတခြားတဦးတည်းသြဇာလွှမ်းမိုးရာမှတဆင့်မြောက်မြားစွာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ limbic သည့်စနစ်ကနေရန်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း cortexအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနေကြတယ်။
စိတ်ခံစားမှုကအရမ်းအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးမသိစိတ်တစ်ပိုင်းအဆင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ်။ စိတ်ခံစားမှုကိုအကြှနျုပျတို့ဖြစ်ပျက်စေရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုထက်အများကြီးပိုဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု၏ဤမရှိခြင်းများအတွက်ရှင်းပြချက်တာလူ့ဦးနှောက်ကိုအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်သောလမ်းအတွက်တည်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်သူတို့ပတ်လည်၌အခြားလမ်းထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ cortex (သတိထိန်းချုပ်မှုများ locus) ကိုအပြေး ပို. ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပြောင်းလဲပါပြီ။ တစ်နည်းမှာ cortex ဖို့ limbic system ထဲကနေအပြေးအမြန်ဆုံးအဓိကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိသမျှမိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာများမြည်သံကိုအခြားဦးတည် running ငယ်ဖုန်လမ်းပေါ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အသံထွက်ရေနစ်နိုင်ပါတယ်။
စွဲလမ်းနေဖြင့်အကြောင်းကိုယူဆောင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို '' hypofrontality '' အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအတွက် prefrontal cortex အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (အာရုံကြောဆဲလ်) ၏ပိန်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာနောက်ကျောကမဖြစ်နိုင်သလောက်ယခုထကြွလွယ်သောနှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်လာသည်သောအပြုအမူလုပ်နေတာရှောင်ရှားရန်အောင် limbic ဦးနှောက်ဖို့ inhibitory အချက်ပြမှုများကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
အဆိုပါ prefrontal cortex ခိုင်ခံ့စေဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု key ကိုဘဝကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ဘဝအောင်မြင်မှု၏အခြေခံသည်။ တစ်ခုမကျွမ်းကျင်သူတွေပဲစိတ်ထဲသို့မဟုတ်စွဲလမ်းနေဖြင့်သည်ညီမျှမှုတစ်ဦးနှောက်အနည်းငယ်သာအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။